Shiinaha HCG Warshadda Strip Test Uurka iyo alaab-qeybiyeyaasha. Kibir
Qalabka Duumada ee Duumada Pf
Qalabka Duumada Pf Pv Qalabka Imtixaanka Degdega ah
Qalabka Baaritaanka Degdegga ah ee Dengue
Mashiinka Tijaabada ugxanta 'LH'
Marinka Baaritaanka Uurka ee HCG
Hal Tallaabo Baaritaanka Uurka HCG waa tallaal isdaba joog ah oo loogu talagalay go'aaminta tayada ee gonadotropin chorionic (HCG) ee kaadida si dhakhso leh loogu ogaado uurka.
Hal Talaabo HCG Baaritaanka Uurkawaa qiimeyn deg deg ah oo hal talaabo oo lagu ogaanayo HCG ee kaadida. Qaabku wuxuu shaqaaleeyaa iskudhaf gaar ah oo loo yaqaan 'monoclonal dye conjugate' iyo polyclonal-solid antibodies si xulasho leh loogu aqoonsado HCG shaybaarka tijaabada oo leh heer aad u sarreeya oo xasaasi ah. In ka yar 5 daqiiqo, heerka HCG sida ugu hooseeya 25mlU / ml waa la ogaan karaa.
Hal duub oo ah baaritaanka uurka HCG halkii kiish oo dahaar ah.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Qalabka baaritaanka wuxuu ka kooban yahay dahab dahaarka leh oo dahaaran antibody β-hCG,
xuubka nitrocellulose horay loo dahaadhay riyaha anti mouse IgG iyo jiirka anti-α -HCG
Agabyada La Bixiyay
Guntin kasta waxay ka kooban tahay:
1. Hal Talaabo oo ah marinka baaritaanka uurka HCG
Sanduuq kasta wuxuu ka kooban yahay:
1.Hal Hal Talaabo oo ah Baaritaanka Uurka ee HCG
3. Xidhmada xirmada
Looma baahna qalab kale ama reagent.
Kaydinta iyo xasiloonida
Ku kaydi fareerka tijaabada 4 ~ 30 ° C (heerkulka qolka). Iska ilaali iftiinka qoraxda. Tijaabadu way xasilloon tahay ilaa taariikhda lagu daabacay warqadda kiishka.
Magaca Badeecada Hal Talaabo Baaritaanka Uurka Uurka HCG
Magaca Sumadda WAQTIGA DAHABKA, astaanta OEM-Iibsadaha
Qiyaasta Qiyaasta In Qalabka Caafimaadka ee Vitro Diagnostic
Habka Dareemida tijaabada koromatografi ee dahabiga ah ee Dahabka
wax Waraaq + PVC
Faahfaahinta 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm
Xasaasiyad 25mIU / ml ama 10mIU / ml
Xirxirida 1/2/5/7/20/25/40/50/100 imtixaannada / sanduuqa
Saxsanaanta > = 99.99%
Gaar ahaaneed Maya falcelin dhan 500mIU / ml oo ah hLH, 1000mIU / ml hFSH iyo 1mIU / ml oo ah hTSH
Waqtiga falcelinta 1-5 daqiiqo
Waqtiga Akhriska 3-5 daqiiqo
Nolosha shelf 36 bilood
kala duwan ee codsiga Dhammaan heerarka unugyada caafimaadka iyo is-baarista guriga.
Shahaadada CE, ISO, NMPA, FSC
Hore: Tijaabada Uurka HCG Dhexdeeda
Xiga: Tijaabinta Uurjiifka LH Dhexdhexaad
1.GUDBINTA TAARIIKHDA IMTIXAANKA
Baaritaanka waxaa la isticmaali karaa laga bilaabo taariikhda ugu horreysa ee la la'yahay.
2.KU-uruurinta iyo maaraynta gaarka ah
The One Step HCG Uurka Imtixaanka waxaa loo sameeyay si loogu isticmaalo tijaabooyin kaadi ah oo cusub. Tijaabada waa in la isticmaalo isla marka la qaado aruurinta muunada ka dib. Koobka kaadida waa in loo isticmaalaa in lagu soo qaado tijaabooyinka, kaadidu uma baahna daaweyn gaar ah.
1) Ka saar faleebada tijaabada duubka ku duuban
2) Fahamka ku dhex quusin kaadida iyadoo fallaadhuna fiiqayso dhinaca kaadida. Kaadida ha ku daboolin xariiqda MAX (ugu badnaan). Waad kala bixi kartaa ka dib ugu yaraan 15 ilbidhiqsi oo kaadida ah ka dibna iska dhig xariijimaha si siman dusha nadiif ah oo aan nuugi karin. (Fiiri sawirka hoose)
3) Akhriso natiijada 5 daqiiqo gudahood.
HA TURJUMIN NATIIJADA 5 daqiiqo kadib.
4) Tuur qalabka tijaabada ka dib isticmaalkiisa keliya qashin qubka.
Taban: Haddii kaliya hal xariiq oo casaan ah uu ka muuqdo aagga xakamaynta, waxaad u qaadan kartaa inaadan uur lahayn.
Positive: Haddii laba sadar oo casaan ahi ka muuqdaan aagga xakamaynta iyo aagga baaritaanka, waxaad u qaadan kartaa inaad uur leedahay.
Aan ansax ahayn: Haddii aanu jirin koox midabkeedu kala duwan yahay oo casaan iyo guduud ah oo muuqda oo ka muuqda aagga TEST iyo aagga KONTOROOLKA, ama keliya nambarka midabka casaanka iyo guduudka ah ee ka muuqda aagga Imtixaanka, imtixaanku waa mid aan sax ahayn .Waxaa lagu talinayaa in kiiskan tijaabadu noqoto soo noqnoqday
Kasetka Tijaabada Uurka HCG
Tijaabinta Uurjiifka LH Dhexdhexaad
Tijaabada Uurka HCG Dhexdeeda